ငှက်ကုလားအုတ်ပု - ဝီကီပီးဒီးယား
†D. n. baudinianus Parker, S.A., 1984
†D. n. diemenensis en:Le Souef, 1907
Distribution in red
အီးမျူး ခေါ် ငှက်ကုလားအုတ်ပု emu (/ˈiːmjuː/) (Dromaius novaehollandiae) မျိုးမှာ ဩစတြေးလျတိုက် ပင်ရင်းဇာတိဖြစ်သည်။ ငှက်ကုလားအုတ်မျိုးကဲ့သို့ မြေပြန့် လွင်ပြင်များတွင်သာ ကျက်စားလေ့ရှိသည်။ ဤငှက်မျိုး၏ ငှက်မွှေးငှက်တောင်သည် အခြားငှက်မွှေးငှက်တောင်များကဲ့သို့ အဆင်းအရောင် တောက်ပြောင်ခြင်း မရှိပေ။ ငှက်ကုလားအုပ်ကလွဲလျှင် ဤငှက်မှာ အထွားအကျိုင်း ငှက်မျိုးဖြစ်လေသည်။ အရပ် ၅ ပေခန့်မြင့်၍ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်မှာ ငှက်ကုလား အုပ်ထက် အနည်းငယ်မျှ သေးငယ်သည်။ လွင်ပြင်ကျယ်ကြီးများနှင့် မြေပြန့်တောများထဲတွင် ကျက်စားတတ်သည်။
ငှက်ကုလားအုပ်ပုသည် သားပိုက်ကောင်များနှင့်ပင် ပြိုင်၍ပြေးနိုင်သည်။ မြေပေါ်တွင်ဖြစ်မူ ငှက်ကုလားအုပ်ပုကို မြင်းများပင်မှီအောင် လိုက်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းလှသည်။ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျ၍ မပြေးနိုင်သောအခါမှသာ ဖမ်းမိနိုင်သည်။ ဖမ်းဆီးသည့် အခါ၌လည်း အနီးသို့ ရုတ်တရက် မကပ်နိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သန်မာလှသော ခြေထောက်များဖြင့် ချဉ်းကပ်လာသူကို အပြင်းအထန် ကန်ကျောက်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကန်ကျောက်ရာတွင် နွားဆိုးကြီးများကဲ့သို့ နံဘေးနှင့်အနောက်ဘက်သို့သာ ကန်ကျောက်တတ်သည်။ ငှက်ကုလားအုပ်များ အရှေ့ကို ကန်ကျောက်ဘိသကဲ့သို့ မကန်ကျောက်နိုင်ချေ။ ငှက်ကုလားအုပ်၏ အစာမှာ အထူးသဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအပွင့်နှင့် သစ်ဥသစ်ဖုတို့သာ ဖြစ်သည်။ ငှက်အရိုင်းတစ်မျိုးပင် ဖြစ်သော်လည်း ငှက်ကုလားအုပ်ပုကို ယဉ် ပါးအောင် သွန်သင်ပေး၍ ရနိုင်သည်။ ဥများကို သဲမြေထဲတွင်သာ ဥအုလေ့ရှိပြီး ဥအရွယ်အစားမှာ ငှက်ကုလားအုပ်၏ ဥ၏အရွယ်နှင့် အတူတူလောက်ပင် ရှိသည်။ အရောင်မှာ အစိမ်း သို့မဟုတ် ပြာမှိုင်းမှိုင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်လျှင် ဥပေါင်း ၉ ဥမှ ၁၃ ဥအထိ အုတတ်သည်။
↑ "The fossil history of the emus, Dromaius (Aves: Dromaiinae)" (1987). Records of the South Australian Museum 21: 85–117.
↑ BirdLife International (2018). "Dromaius novaehollandiae". IUCN Red List of Threatened Species 2018. IUCN.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Davies၊ S.J.J.F. (2003)။ "Emus"။ in Hutchins, Michael (ed.)။ Grzimek's Animal Life Encyclopedia။ 8 Birds I Tinamous and Ratites to Hoatzins (2nd ed.)။ Farmington Hills, Michigan: Gale Group။ pp. 83–87။ ISBN 978-0-7876-5784-0။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Brands၊ Sheila (14 August 2008)။ Systema Naturae 2000 / Classification, Dromaius novaehollandiae။ Project: The Taxonomicon။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Names List for Dromaius novaehollandiae (Latham, 1790)။ Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငှက်ကုလားအုတ်ပု&oldid=718366" မှ ရယူရန်
ဩစတြေးလျတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။